UDig, umbono wokuqala - iGeofumadas
uDig, umbono wokuqala
NgoJanuwari, 2010 Geospatial - GIS, I-GvSIG, kokuqala, uDig
Sesivele sibheke amanye amathuluzi umthombo ovulekile endaweni ye-GIS, phakathi kwabo qgis futhi gvSIG, ngaphandle izinhlelo ezingekho-free ukuthi sihlole ngaphambi. Kulokhu sizokwenza nge I-User-Friendly Desktop Internet I-GIS (uDig), omunye walabo abangena I-PortableGIS.
UDig ukwakhiwa kenkampani Ukucatshangelwa Ucwaningo, ngubani ngemuva kokuthola umklomelo obalulekile oxhaswe yi I-GeoConnections, batshale imali kulokhu nakwezinye izinto ezenzekayo. I-UDig inikwe ilayisense ngaphansi kwe-GNU I-LGPL, le nkampani efanayo idinga ukuthuthukiswa I-PostGIS kanye neminikelo ebalulekile ku-Geoserver.
Kuyinto intuthuko enkulu, ukwephula imihlangano eminingi yamathuluzi wendabuko, ebusweni obufana qgis. Phakathi kwezici zalo kungashiwo:
Yakhelwe ku-Java, ngaphansi kwesimo se-Eclipse (njenge-gvSIG)
Inkululeko ukumisa isibononisi enviable, ukukwazi udonse amafasitela cishe noma kuphi, akhiphe ngemuva, uhudula zangaphakathi nezangaphandle, ukunciphisa izinkinobho ukulungisa ngokukhululekile imiphetho ozimele.
Isivinini sokukhishwa kuhle kakhulu (naphezu kokuba ngeJava, ngizame kusukela ku-a I-Acer Aspire One, nge-Windows XP); Isebenza ku-Linux ne-Mac, kusobala ngokusebenza kangcono.
Ngokuphathelene nokufunda amafomethi e-vector, kunqunyelwe ngamafayela aphikisiwe (ayikwazi ukufunda i-dgn, i-kml, i-dxf, noma i-dwg) kepha ababhemayo (gml, xml). Ukuphela kwendabuko efundayo yi- ifayela lokuma.
Ngezithombe ze-raster nakho kunemikhawulo yayo, kodwa ungakwazi ukunamathela kumasevisi we-wms nezinye izinsizakalo ze-intanethi.
Ngokolwazi olunamandla, i-ArcSDE, i-DB2, i-MySQL, i-Oracle Spatial, i- I-PostgreSQL/ I-PostGIS ne-WFS, ngakho-ke ngokusebenzisa ezinye zazo ungahlanganisa idatha ye-vector engayifinyelele ngendlela evamile.
Igridi, ibha yesikali, nenganekwane kuhlanganiswe sengathi kuyizendlalelo. Lokhu kuyathakazelisa ngoba akusikho ukusebenza kwesixhumi esibonakalayo sokuthunyelwa kepha kwedatha. Yize ukumiswa kwayo kuyinkimbinkimbi (ekuboneni kokuqala)
Inezici ezenza kube usizo, njenge:
-kopisha / unamathisele de izici (njenge GIS ezininginingi)
-njengokuthi xml en inothi
-uphawu oluphawulekayo lwama-thematic, ngezixwayiso ze gwema izinkinga ngezimpumputhe zombala, izibukeli ze-CRT, amaprosesa, abaqaphi be-LCD, ukunyathelisa umbala nokuqopha.
Kuyathakazelisa ukuthi ithuluzi livame ukuza nesibonelo esihlelwe, esifaka umphakathi waseCanada kanye nesisekelo samadolobha, amazwe, izindawo zesikhathi, nezithombe zesathelayithi. Leli qhinga lihle kakhulu ukuqonda amandla alo ngesikhathi sokulibona okokuqala, into ezinye izinhlelo ezilanda, zifaka futhi zenze umbuzo omkhulu okufanele ikunake:Futhi manje ngenzani ngalawa mabhathini??
Ukuhlolela ukuvuselelwa ku-inthanethi kungenye into ephathekayo amanye amaphrojekthi okufanele ayicabangele. Kulokhu, okucishe kufane ne-gvSIG, kunesithiyo embukisweni wokuqala, futhi lokho ukuthi ingcebo ekuzandiso ayinakho ukumaketha okwanele noma ayinantambo ejwayelekile ekhuthaza ukuba lusizo kwayo (futhi kuleso simo isimo esisemthethweni). Okungenani, ngalokhu kubuyekezwa okuku-inthanethi (okungenayo i-gvSIG), ngemuva kwemizuzu embalwa yokulanda ngibona amakhono amaningi awatholayo kuzandiso ze-Grass JGrass, SEXTANTE, Umshini we-Horton kanye nama-Axios ekusetshenzisweni kwe-hydrological, amamodeli we-3D, ukuxhumana kwe-GPS, i-shaker kanye ne-vector.
U-Dig wenza izinto ezithakazelisayo, njenge-qGIS ihambisana ne-JGrass, kodwa njengesisombululo se-GIS akuyona ithuluzi elivulekile lomthombo ovulekile, ngokwemisebenzi yokwakhiwa kwe-vectorial nokuphathwa kwe-topology, idlula qgis (enezandiso eziletha) futhi gvSIG (ngaphandle kwezandiso). Ngenkathi ikhulile, futhi inalokho umsebenzisi ojwayelekile angakudinga, amandla ayo angaba womsebenzisi onamandla wokuthuthuka weJava; ukugxila kwakho I-Internet ye-GIS Kunengqondo ukuxhuma kudatha futhi ufune izibuyekezo kodwa kuze kube yilapho ukushicilela kuncane okungeke kunikelwe (i-Geoserver ingenza).
Funda ambalwa amafomethi we-CAD / GIS, akakwazanga ukuhlanganisa umphakathi ku- lokho gvSIG, futhi, kulokhu, ukufunwa kwabasebenzisi kanye nezivumelwano eziyisisekelo kuyimoto ebalulekile ukusheshisa ukuthuthukiswa, isici akubonakali zifinyelele ekukhuthazeni kwe-gvSIG (yebo ezingeni leCanada, kodwa hhayi emhlabeni jikelele).
Iqiniso amaqhinga okuphuka Kwenza ulahlekelwe amaphuzu ambalwa, njengoba abasebenzisi abaningi behluleka ukulawula ekuqaleni (ekuphathweni kwamaphrojekthi, izinhlu nezinhluko). Phindela la maphuzu ukuze kube lula ukuthi uke wazi ukuthi ungasebenzisa kanjani, nakuba kuyi-philosophical ye-Java engahlaziywa kufanele uzinakekele ibhalansi ukuze inguqulo eyisisekelo kanye nezandiso (lokho kunengqondo) ingabonakali (ekuziphenduleni kwayo mahhala) isihlahla sikaKhisimusi okubhekiselwe kuwo amatshwayo amaningi ukuthi usuku olulodwa silahlekelwa, noma ukuvumelana, noma ukulinganisa, noma umugqa wesikhathi.
Ukungaziwa kahle kuyingozi enkulu (eyenzeka kwabanye abaningi), ukuba yisisombululo seqembu elikhethiwe akuyona isiqinisekiso sesikhathi eside, hhayi kwizicelo umthombo ovulekile; ngakho-ke, kancane uhlelo lwe-systematization okuhlangenwe nakho kanye imibhalo, yize umthetho olandelwayo wokwenza izinqumo ezintsha uyathandeka. Kumasipala, uDig kungaba yisixazululo esisebenza kakhulu, kepha ukuthola ukwesekwa nokuqeqeshwa kungaba njalo inkinga isinkimbinkimbi (kude British Columbia); kubonakala kungcono kakhulu kumaphrojekthi lokho kuzobandakanya ukuzenzela umuntu nokuthi bayoba nesabelomali ukuze bayisekele (isib. imvelo, ubungozi).
Ngaphandle kweprojekthi yamazambane asePeru nalokho okushiwo i-Axios, kuncane okuye kwazwakala uDig kwimvelo yaseSpanishi; ukuqhubeka kwezixazululo zalolu hlobo ezingeni lezwe kuncike ekusebenziseni izinqubomgomo kokuthuthela kwesofthiwe samahhala, isihloko esincane kakhulu eLatin America.
Ukungalungi okukhulu engikubona uDig kuwukuthi ukuhlala isikhathi eside, iqiniso lokuba yithuluzi elisekelwa yinkampani yangasese lidala ukungabaza ngemibuzo efana nalokhu:
Futhi uma ukuCatshangelwa Ucwaningo kusho ngolunye usuku ukuthi izindleko zokuqhubeka nokwesekwa nokuthuthukiswa zingenakulungiswa, ngubani ozokwenza?
Ingabe umphakathi ungadala ukuhlangabezana nokukhula komhlaba wonke, uma kunesidingo esikhulu?
Azikho yini ezinye izinhlelo zeJava / Eclipse ezenza okufanayo, okuyizinto Open Source, okubonakala sengathi iphinda imizamo?
Akubonakali ukuthi amathuluzi mahhala amasu ezinkampani ezigcina ekuthunjeni ukusekelwa?
Ngokuqinisekile i-mara Vula Kunezimpendulo ezicacile kulokhu okungenhla, kodwa kufanelekile ukucabanga ngokusimama, okuyinto ngokwayo eyinkimbinkimbi emisebenzini yamahhala, ngoba uma sihlukanisa izici zobuchwepheshe nezibuchwepheshe ezibonakala zisebenza kahle, isimo sezimali kungabaza ohambeni olude. Namuhla siphila ezikhathini lapho isiphepho sibhidliza uhlelo lomnotho lomhlaba, a zapatazo emhlanganweni ungabangela impi ephela ngosuku olulodwa ngezimpawu ezinhle, ukuwa kwezimakethe zamasheya ngaphansi kwezizathu ezamukelekayo izinkampani ezinkulu ukuba zihambe fuck kungaphansi kwehora.
Lezi zinto, senze sicabange ukuthi ngaphambi kobubanzi obuningi (futhi yebo lokho kuningi) yezixazululo ezinikeza umuntu inkululeko ephelele, ukuhlakazwa kwemizamo nemali kusengozini (ngoba ekugcineni lokho kubiza). Inkululeko ingaba kakhulu kangangokuba ngolunye usuku ingasetshenziswa ukushiya amaphrojekthi ngenxa yezinqumo ezenziwe abanye ababengabasunguli bomqondo wokuqala. Mayelana nalokhu, impela abaningi sebebhalile, kepha kufanele siqhubeke nokucabanga ngakho ngokucophelela, sikhumbula ukuthi ngelinye ilanga izimali zethu zizolinganiswa ngomthelela hhayi ngegeofumada.
Njengentuthuko: kakhulu kakhulu futhi ewusizo, amanye amaphrojekthi kufanele alingise imibono evela lapha.
Njengesixazululo: sinokulinganiselwa okukhulu uma kuqhathaniswa nabanye ezingeni layo, (ekuboneni kokuqala)
Njengeprojekthi: uhamba kancane kakhulu futhi akubonakali ukuthi uyashesha.
Njengoba uzama izandiso, singakunika amaphuzu owengeza emva kokuqala kokuqala.
I-Acer Aspire DGN DWG GPS utshani I-GvSIG OS KML GIS ezininginingi umbono wami wokuqala QGIS
Thumela Previous«Langaphambilini I-CD Yokufunda ye-GIS, insiza enhle yokufundisa
Post Next I-Poker, enye indlela eya enkingeniOkulandelayo »
Uphendula “uDig, umbono wokuqala”
Kodwa sengisuxazululwe ngokukopisha i-sqljdbc.jar kufolda ye-lib \_ ext ye-JRE.
Ihle kakhulu ibhulogi yakho. Siyakuhalalisela
Futhi yiluphi uhlobo lwe-JRE osebenzayo?
Ngicacisa ukuthi ngifake inguqulo 1.2 ye-Dig ku-XP. Uma kwenzeka lokho kusiza ...
Ngisanda kufaka uDig nami ngayithanda.
Into kuphela engangithandiyo ukuthi angikwazi ukufinyelela ku-database ye-sqlServer 2008. Lapho ngenza:
engeza ungqimba -> IdathaStores-> I-MS SQL Server
Ngithola isaziso esithi: "Le fektri ayitholakali, imvamisa kukhombisa i-JDBC elahlekile, noma isithombe-i-EXT esingafakwanga kuwe JRE".
Futhi zombili zifakwe futhi zigijima ne-GEOSERVER. Ingabe umbuzo wendlela yokufaka uDig? Ku-GeoServer kufanele uhambise amanye amareyibrari kufolda ethile. Futhi kuDig?
Uma umuntu eneminye imininingwane, ngiyabonga uma bengisiza.
Ngisho neSQL Server 2008 isivele ihlanganisa ukwesekwa kwendawo.
Ingabe unamathuba okuxhuma ku-MS SQL Server 2008?
YiJava. Bheka lesi sixhumanisi.
Igalelo lakho lihle kakhulu, lilungelo elihle ngeke ukwazi ukuthi yiziphi izilimi zokuhlela ezisekela ukukhulisa amandla alo? Ngabe ngenza isifundo se-geomarketing futhi nginesithakazelo ohlelweni ngaphakathi kwe-GIS
Siyabonga ngomnikelo, lapha ngishiya isixhumanisi
U-Diva ugijima ku-DIG! Kunezandiso ezimbalwa zesimo sezulu nesimo se-bioclimatic njengalezi. Kuyinto iphrojekthi ezinye izinhlangano ezizibandakanya ngazo, ngendlela ethile eqinisekisa ikusasa layo.
Yebo, uqinisile, kukhona izandiso ezihehayo, ezifana nalezo zeHorton Machine, ezibandakanya amamodeli wedijithali amahle kakhulu nokusebenzisa kwe-hydrological; futhi, ngalabo be-SEXTANTE, iGrass ne-JGrass kuza nokusebenza okuningi kwe-raster ne-vector.
Ngenze izinguquko ezimfushane kokuthunyelwe, kodwa sizobona kwezinye izikhala lapho sisebenzisa izandiso.
Uzikhiphe kancane ukubeka amazwana. nezandiso zithola okuningi